१२ बि घा जमिन देखेपछि २० वर्षीय युवकले गरे ६० वर्षीय वि धवा सँग वि वाह – Online Nepal
१२ बि घा जमिन देखेपछि २० वर्षीय युवकले गरे ६० वर्षीय वि धवा सँग वि वाह
May 21, 2020 2924
काठमाडौ । एकजना महान दार्शनिकले माया र यु द्धमा सबै कुरा जायज हुन्छ भनेका थिए । तर अहिले पनि समाजमा यस खालका उदाहारणहरु लगातार देख्नमा आइरहेका छन् । अहिले बाहिर आएको एक घटनाले सबैको होस उडाएको छ । सामान्य रुपमा हेर्दा बिहेको विषयमा कुरा गर्दा केटा र केटीको उमेरको अन्तरलाई ध्यान दिइन्छ ।नेपाल लगायतका देशहरुमा मात्र नभई विश्वभर नै केटाको उमेर केटीको भन्दा केही बढी हुन्छ । कहिलेकाहीँ केटीको उमेर पनि थोरै बढी भएका घटनाहरु हाम्रा वरपर छन् ।
धेरैमा १२ वर्षसम्मको फरक हामीले देखेका छौ तर पहिलेको भन्दा अहिलेको अन्तर केही कम हुँदै गइरहेको छ । तर, ४० वर्षको उमेर अन्तर भने के होला ? तर यस्तै एक विवाह भारतको मुरादाबादको रामपुरमा भएको छ । यहाँ एक २० वर्षीय युवकले ६० वर्षकी महिलासँग बिहे गरेका छन् । रामपुरको सैदनगरमा भएको यो विवाहका विषयमा त्यस क्षेत्रमा निकै चर्चा भइरहेको छ । युवक हरदोइका भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् ।
समाचार अनुसार यी दुईको प्रेम मिसकलको माध्यमबाट सुरु भएको थियो । दुई वर्ष पहिले यी युवकले आफ्नो मोवाइलबाट कहीँ फोन गर्दै थिए यही क्रममा गल्तीवश फोन अन्तै गयो । ६० वर्षकी ती महिलाले फोन उठाइन् त्यपछि दुवैबीच फोनमा लगातार कुरा हुन थाल्यो । फोनमा कुरा बढ्दै जाँदा दुवै नजिकिँदै गए । महिलाले युवकलाई आफ्ना पतिको मृत्यु भइसकेको बताएकी थिइन् ।महिलाले आफूसँग करिब १२ विघा जमिन भएको बताउँदै बिहेपछि युवक आफूसँगै बस्नुपर्ने बताइन् ।
युवक पनि यसको लागि तयार भए । गत शनिबार युवक महिलाको गाउँ पुगे र दुवैले बिहे गरे । महिलाकी छोरीले आमाको बिहेबारे थाहा पाएपछि माइती आएर विरोध गरिन् । विवाद पुलिससम्म पुनि पुग्यो जहाँ महिला र युवाले आफ्नो इच्छाअनुसार बिहे गरेको बताएपछि पुलिसले पनि कुनै कारवाही गरेन ।
Prevअनुष्का शर्माले प्रयोग गरिन नेपाली नारीमाथि अ स्वीका र्य श*ब्द, कारबाही अघि बढ्यो !
Nextयी महिलालाई जाँ*ड र*क्सी नखाने इमान्दार वर चाहियो, यसरी सिधैं सम्पर्क गर्नुहोस्
बेला बेलामा पेट बाउडिन्छ ? सावधान आन्द्राको समस्या हुनसक्छ, यस्ता व्यक्तिलाई बढी जोखिम